Window 7, 8 နဲ့ 10 တွေမှာ Mouse ရဲ့ အရောင်နဲ့ အရွယ်အစား ပြောင်းလဲပုံ
88 Views Home NEWS Local HOW TO FEATURES Knowledge Interview Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Random Download Android iOS Window FUNNY PHOTOS HUBS Android Apple Samsung HOW TO PC & LaptopsWindow 7, 8 နဲ့ 10 တွေမှာ Mouse ရဲ့ အရောင်နဲ့ အရွယ်အစား ပြောင်းလဲပုံ U Min Thant Oct 06, 2016088
သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Mouse Pointer ရဲ့ အရောင်၊ အရွယ်အစားစတာတွေကို အပြောင်းအလဲ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆို အသဲပုံစသည်ဖြင့် ပုံအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်ပေမယ့် လက်ရှိ Window 10 မှာတော့ အဲ့လောက်ထိ လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရောင်ပြောင်းတာ၊ အရွယ်အစားပြောင်းတာတွေတော့ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အသုံးဝင်နိုင်မှာပါ။အရင်ဆုံး Control Panel ကိုသွားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် “Ease of Access” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Ease of Access Center ထဲက Change how your mouse works (Window7မှာဆိုရင် Make the mouse easier to use) ဆိုတဲ့ Link အထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။
အထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံကို ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ။
လွယ်ကူပါတယ် သင့်အနေနဲ့ အလွယ်တကူပဲ ဒါကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Window 8 နဲ့ 10 တွေမှာဆိုရင် Window Setting ထဲမှာလည်း ဝင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူပြီး Window ၃ခုလုံးရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။
Facebook Comments computerPC/LAPTOPS
About U Min Thant U Min Thant is the nick name of Min Thant. He loves english language and translator life. At the past time he hasn't the experience of translation. He prefer writing about Technology and Sciences Technology Things. And his hobby is to watch movies and read books. So he wants to translate many Movies and Books too. In his free time, you'll find U Min Thant in front of the TV and polish his phone. View all posts by U Min Thant Previous articleလူ့အသိစိတ်ကို စက်ရုပ်ကိုယ်ထည်တစ်ခုဆီ လွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့နည်းပညာ တီထွင်နိုင်သူကို ကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်း ချီးမြှင့်မည်
Next articleအသစ်လဲလှယ်ထားတဲ့ Note7ဖုန်း ထပ်မံပေါက်ကွဲ